Vallejo Oo Dhaxlay Lambarkii Pepe | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Vallejo Oo Dhaxlay Lambarkii Pepe
Published on July 8, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(08-07-2017) Real Madrid ayaa buuxisay booskii uu banneeyey halgamaagii reer Portugal ee Pepe oo ka tegay kooxdan oo uu u ciyaarayay muddo toban sannadood ah.
Difaaca da’da yar ee Jesus Vallejo oo ka mid ah ciyaaryahannada kasoo baxay da’yarta Real Madrid ayaa ay kooxdu kasoo celisay amaah uu ugu ciyaaray xili ciyaareedkii hore kooxda Eintracht Frankfurt oo uu ku muujiyey inuu gaadhay wakhtigii uu xidhan lahaa funaanadda Real Madrid ee loollanka badan looga baahan yahay.
Duhurnimadii Jimcaha ayay Real Madrid kusoo bandhigtay garoonka Santiago Bernabeu ciyaartoygeedan oo xidhan funaanad uu dhabarka kaga qoran yahay lambarka 3 oo uu xidhan jiray Pepe.
Hadal uu warbaahinta siiyey ayuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo kooxda Real Madrid ee waaweynka, isla markaana uu ku dedaali doono inuu u dagaallamo booskiisa oo uu kasoo baxo waajibaadka saaran iyo waxa laga filayo ba.
Waxa uu tibaaxay inuu ogyahay in laga sugayo shaqo badan, naf-hurnimo iyo inuu ilaaliyo qiimaha ay Real Madrid leedahay ee wakhtiga dheer layska soo dhaxlayay.
Waxa kale oo uu uu xusay in uu aad ugu farxay markii loo sheegay inuu xidhanayo lambarka 3 oo uu banneeyey Pepe, taas oo dhiirigelin u noqotay. Waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyey mahadnaq uu u diray maamulka, ciyaartoyga iyo tababareyaasha kala duwan oo lagu daray taageereyaasha kuwaas oo uu sheegay inay usoo dhoweeyeen si cajiib ah.